SHENZHEN KING OF SUN INDUSTRY CO.,LTD [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer , Trade Company အဓိကစျေးကွက်များ: Africa , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , Other Markets , West Europe , North Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်:81% - 90% Cert:ISO9001, CE, Test Report ဖေါ်ပြချက်:အလိုအလျောက်အာရုံခံကိရိယာ Faucets,အလိုအလျောက်ဝှမ်း Faucets,အလိုအလျောက် inductive Faucets,,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > ရေချွေရေဆေး > အလိုအလျောက် Faucets
အလိုအလျောက် Faucets ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, အလိုအလျောက်အာရုံခံကိရိယာ Faucets, အလိုအလျောက်ဝှမ်း Faucets ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, အလိုအလျောက် inductive Faucets R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
Public Washroom အတွက်အလိုအလျောက်အာရုံခံကိရိယာ
အနီအောက်ရောင်ခြည်အလိုအလျှောက်အာရုံခံကိရိယာ Electric Basin Faucet
ပြည်သူ့ရေကန်တွင်အလိုအလျောက်ပါ ၀ င်သောဆေးထိုးဆေး
အလိုအလျောက် inductive အာရုံခံကြေးဝါအင်တုံ Faucets
အလိုအလျောက်အနီအောက်ရောင်ခြည်အာရုံခံကိရိယာ Faucets ကြေးဝါအီလက်ထရောနစ်
ကြေးဝါ Chromed နှင့်အတူနံရံတပ်ဆင်ထားအာရုံခံအင်တုံ Faucet
ကြေးဝါ Touchless လက်များအခမဲ့အလိုအလျောက်အာရုံခံကိရိယာ Faucet
အခမဲ့အပူနှင့်အအေးအာရုံခံကိရိယာရေချိုးခန်း Faucet ကိုထိပါ
ကုန်းပတ်တပ်ဆင်ထားလူပျိုအပူချိန်ထိန်းချုပ်ရေး Faucet တပ်ဆင်ထားသည်
အလိုအလျောက်အာရုံခံ faucet က၎င်း၏လုပ်ရပ်များထိန်းချုပ်ရန်, အသုံးပြုသော Infrared induction နိယာမအခမဲ့သုံးစွဲနိုင်, ရာခိုင်နှုန်းကို sensitivity ကို, ရေသင့်လက်ကချဉ်းကပ်ခြင်းနှင့်ချက်ချင်းရပ်လိုက်သည့်အခါအထဲကစီးဆင်းသည်မိုက်ခရိုကွန်ပျူတာတပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်, ထိုသို့အများပြည်သူသောအရပ်တို့ကိုအဆင်ပြေစေရန်အတွက်သင့်လျော်သော...
လက်မှတ်: CE, ISO9001:2008
အလိုအလျောက် inductive Faucets အာရုံခံနိုင်သည့်အာရုံခံကိရိယာတစ်ခုရှိပြီးသင့်တွင်မည်သည့်လက်ကိုင်ကိုမဆိုထိရန်နှင့်ပိတ်ရန်မလိုပါ။ ဒီအ လိုအလျှောက်အင်တုံ Faucets နှင့်အတူ သင်၏ရေသုံးစွဲမှုသည်များစွာလျော့ကျသွားမည်ဖြစ်ရာနောက်တဖန်ရေလျှံသွားမည်ကိုသင်ဘယ်တော့မျှစိုးရိမ်မည်မဟုတ်ပါ။ Sensor Faucets...
Automatic Basin Faucets တွင်ထိခိုက်လွယ်သောအာရုံခံကိရိယာတပ်ဆင်ထားသည်။ ထို့ကြောင့်သင်ဖွင့်ရန်နှင့်ပိတ်ရန်လက်ကိုင်ကိုမလိုအပ်ပါ။ Automatic Sensor Faucets ဖြင့်သင်၏ရေအသုံးပြုမှုကိုများစွာလျှော့ချပေးပြီးသင်ထပ်မံလျှံ့နေမည်ကိုသင်စိတ်ပူမည်မဟုတ်ပါ။ Water Saver Taps. အိမ်နှင့်စီးပွားဖြစ်အသုံးပြုရန်အလွန်ကောင်းသည်။ Water Saver...
လက်မှတ်: CE, ISO9001:2015
Public Washroom အတွက်အလိုအလျောက်အာရုံခံကိရိယာ အလိုအလျောက် inductive faucets များတွင်ထိခိုက်လွယ်သောအနီအောက်ရောင်ခြည်အာရုံခံကိရိယာတပ်ဆင်ထားပြီးထိတွေ့မှုကင်းသောလည်ပတ်မှုရှိသည်။ တာရှည်ခံသောဘက်ထရီသက်တမ်းအတွက်အဆင့်မြင့်စွမ်းအင်ချွေတာသောဒီဇိုင်းဖြင့်အသုံးပြုသောအခါမည်သည့်စက်၏အနေအထားနှင့်မဆို အလိုအလျောက်အင်တုံတွင်း...
အလိုအလျောက်သော Induction Faucets အမျိုးအစားများ ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် တရုတ်နိုင်ငံမှအထူးထုတ်လုပ်သူများ၊ အလိုအလျောက်အာရုံခံကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်းများ ၊ အလိုအလျောက်အင်တုံဆေးကောင်တာများ ပေးသွင်းသူများ / စက်ရုံများ၊ အလိုအလျောက်ခြုံငုံမိသောဆေးတပ်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာသုတေသနပြုခြင်း နှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်း ၏ လက်ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များ...
Automatic Sensor Faucets များကိုရေချိုးခန်း၊ ဟိုတယ်နှင့်အခြားအများပိုင်အဆောက်အအုံများတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်ကျောင်း၊ ရုံးအဆောက်အအုံနှင့်ဘူတာများအတွက်ဖြစ်သည်။ လက်ခတ်အလတ်စားကိုယ်တိုင်ဖွင့်ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်းသည်ဘက်တီးရီးယားအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ကူးစက်မှုကိုထိရောက်စွာရှောင်ရှားနိုင်သည်။ အလိုအလျောက် Inductive...
ဤအလိုအလျှောက်အာရုံခံကိရိယာ Faucets သည်လက်ဖြင့် ထိတွေ့ ကိုင်တွယ်နိုင်သော Save Water Taps များ ဖြစ်သည်။ DC ကနှင့် AC inductive အဆို့ရှင်နှင့်အတူအကြမ်းခံအဆို့ရှင် core ကို, အာရုံခံ faucets ပိတ်,fse ဌပုံမှန်ဘုံဘိုင်ထက် 70 အကြောင်းကို% ရေကယ်တင်တော်မူ၏။ အများသုံးရေချိုးခန်းတွင်တပ်ဆင်ပါ။ စွမ်းအင်ချွေတာသော Faucets...
Public Hotel ရေချိုးခန်းအတွက်ကြေးဝါအလိုအလျောက် Infrared Sensor Faucet ။ Sensor Faucets ကို AC / DC ကြေးဝါပစ္စည်းများ၊ Chorme Automatic Sensor Faucets AC 22V, DC 6V ဖြင့်အလိုအလျောက်ဆေးကြောခြင်း Inductive Faucets inductive Zone သည် ၁၅cm ညီမျှသည်။ အပြန်အလှန်ကူးစက်တတ်သောရောဂါများ။ လက်ဖြင့်ကိုင်တွယ်ခြင်းမရှိသော Faucets...
အဆိုပါအလိုအလျောက် induction faucet "Touch ကိုအခမဲ့" အားသာချက်ဖြစ်ပါတယ် Cross-ညစ်ညမ်းမှုကိုကာကွယ်ရန်နှင့်စေ့စေ့စပ်စပ်ကျန်းမာလက်အဝတ်လျှော်အားပေး။ သင်သည်သင်၏လက်ကိုကိုင်ပြီးအာရုံခံကိရိယာအကွာအဝေးသို့ရောက်သောအခါ၎င်းသည်လုံးဝလက်မရှိသောလည်ပတ်မှုဖြစ်သည်၊ အလိုအလျောက်အင် တုံမျက်နှာဖုံး များမှရေသည်အလိုအလျောက်ထွက်လာသည် ၊...
ရေသန့်သည့် Automatic Inductive Faucets သည် အပေါက်တစ်ပေါက်တည်းကို chrome တစ်ခုတပ်ဆင်ထားသည်။ သင်၏လက်များသည်အာရုံခံနိုင်သည့်အကွာအဝေးတွင်ရှိနေပြီး အလိုအလျောက်အင်တုံဆေးခွက် များသည်အလိုအလျောက် ပွတ် ပေးပါလိမ့်မည်။ အာရုံခံကိရိယာရှိညွှန်ပြမီးသည်တစ်ချိန်ကမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖြစ်သွားလိမ့်မည်။...
Handy ၏ အလိုအလျောက်နံရံကပ်တပ်ဆင်ထားသည့် Sensor Faucets ၊ ခန္ဓာကိုယ်ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်၊ လက်များကိုအာရုံခံကိရိယာအကွာအဝေးအတွင်းထားရှိမှသာလျှင်ရေသည်စီးဆင်းလိမ့်မည်။ ဤသည် စွမ်းအင်ထိရောက် Faucets ကိုအထောက်အကူပြုရန်။ တပ်ဆင်ပြီးနောက် ရေချွေတာသည့်ကိရိယာ သည် Hand Free Faucets ၊ Handy's Automatic Basin Faucets ဖြစ်သည်...
အလိုအလျောက်အာရုံခံကိရိယာ Faucet စီးဆင်းမှုသည်အလိုအလျောက်ပြုခြင်း၊ ရေကိုအလိုအလျောက်ကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်း ။ Automatic Basin Faucets များသည် AA AA alkaline ဘက်ထရီ ၄ လုံးကိုနေ့စဉ် အသုံးပြု၍ 200 ကြိမ်အသုံးပြုပြီး ၂ နှစ်အတွင်းဘက်ထရီကိုပြောင်းလဲရန်မလိုအပ်ပါ။ စဉ်ဆက်မပြတ်အသုံးပြုပြီးနောက်စက္ကန့် ၆၀...
All-in-one ပေါင်းစပ်ထားသောအလိုအလျောက်အာရုံခံကိရိယာ Faucets Features 1.Control: SCM.Water Saving Devices များနှင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောရေသည် ၁ မိနစ်ထက်ကျော်လွန်သောအခါရေကိုအလိုအလျောက်ရပ်တန့်စေသည်။ 2.Adjustable အကွာအဝေး - Induce အကွာအဝေးကိုအလိုအလျောက် inductive Faucets များထိခြင်းမှကင်းဝေးအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည် 3.Strainer...
အနီအောက်ရောင်ခြည်အလိုအလျှောက်အလိုအလျောက်သော induction နည်းပညာ၊ ကြာရှည်ခံသောကြေးဝါကိုယ်ထည်၊ ကြေးဝါ ဦး ဆောင်သောကိုယ်ထည်၊ အဆင့်မြင့်ခရိုမီယမ်အပြီးတွင်အာရုံခံကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်း၊ အရည်အသွေးအာမခံချက်၊ စျေးနှုန်းနှင့်သက်ဆိုင်သောနံရံကပ်တပ်ဆင်ထားသည့်အလိုအလျောက်သော induction Faucets များ။ Automatic Inductive Faucets သည်ရေဖြစ်သည်။...
Automatic Inductive Faucets တွင်အထိခိုက်မခံသောအာရုံခံကိရိယာတပ်ဆင်ထားသည့်အတွက်သင်ဖွင့ ်၍ ပိတ်ရန် Sensor Faucets ၏လက်ကိုင်ကိုမလိုအပ်ပါ။ ရေစားသုံးမှုမှတပါးဒီအလိုအလျောက်အာရုံခံ faucet, ရေ Saver ဘုံဘိုင် ith w လွန်စွာလျှော့ချနှင့်သင်အိမ်ပြန် &...
ခေတ်မီစတိုင်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောလုပ်ဆောင်မှု အလိုအလျောက်အင်တုံဆေးကြမ်းခင်းများသည် မီးဖိုချောင်သုံးရေကန်၊ ရေစုပ်စက်၊ ရေချိုးခန်း faucet နှင့်အိမ်သာတို့အတွက်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ လွတ်လပ်သောအတွင်းပိုင်းရေပေးဝေရေးစနစ်သည်သင့်အားခဲနှင့်နီကယ်များမှသောက်ရေအတွက်ကာကွယ်ပေးသည်။...
အပူနှင့်အအေးခံခြင်းအနီအောက်ရောင်ခြည်အနီအောက်ရောင်ခြည်သုံးရေဆေးရောနှောခြင်း။ ၎င်းသည်ဘယ်ဘက်အလှည့်ရှိရေအေးနှင့်ရေကန်ကိုညာဘက်လှည့်ရာတွင်အသုံးပြုသောအင်တုံရောနှောစက်ဖြစ်သည်။ ရေချွေတာသည့်ကိရိယာများ - သင်၏လက်များသည် induction zone သို့ချဉ်းကပ်သောအခါရေထွက်လာပြီးသင်၏လက်များကိုပြန်ဆွဲထုတ်သည်နှင့်ချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းပါ။...
အပူနှင့်အအေးပေးသည့်အလိုအလျောက်အာရုံခံကိရိယာ အပူချိန်ထိန်းသော့ခွက်အပူနှင့်အအေးခံရောနှောကြေးဝါတစ်ခုတည်းလီဗာအင်တုံကိုပုတ်ပါ။ အလိုအလျောက်အင်တုံ faucets ရေချွေတာကိရိယာများရေအလိုအလျောက်ထောက်ပံ့။ Sensor Automatic Inductive Faucets သည်ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး အဆင်ပြေလွယ်ကူစေရန် မလိုအပ်ဘဲပိတ်ထား ရန်မလိုပါ။...
ကြေးဝါ faucets ကုန်းပတ် chrome အင်တုံ faucet တပ်ဆင်ထား။ အပူအအေးအော်တိုအာရုံခံ faucets ။ အလိုအလျောက်အာရုံခံနိုင်သည့်ထိတွေ့မှု၊ ကူးစက်မှုကိုတားဆီးပါ တစ်ခုတည်းအပေါက်ကုန်းပတ်တပ်ဆင်ထားတပ်ဆင်ထားသည်။ ရေပူနှင့်ရေအေးညှိရန်လီဗာသည်အပူချိန်ကိုထိန်းညှိပေးသည်။ အလိုအလျောက်အင်တုံဆေးကြောများသည်ခိုင်ခံ့သောကြေးဝါတည်ဆောက်ခြင်း၊...
အလိုအလျောက်အာရုံခံကိရိယာ faucets ရေ faucets နံရံတပ်ဆင်ထား chrome အင်တုံ faucet.Ceramic သည့်အရာတစ်ခု, NO.59 အဆင့်မြင့်သောကြေးဝါတည်ဆောက်မှု၊ သွပ်လက်ကိုင်များ။ အလိုအလျောက် inductive faucets များတွင် chrome finish ပြုလုပ်ရန်အတွက် laters ငါးခုရှိသည်။ နှစ်ခုအပေါက်နံရံတပ်ဆင်ထားတပ်ဆင်ခြင်း, ပူခြင်းနှင့်အအေး switch...
တရုတ်နိုင်ငံ အလိုအလျောက် Faucets ပေးသွင်း
အလိုအလျောက် faucet တွင်ထိခိုက်လွယ်သောအာရုံခံကိရိယာတပ်ဆင်ထားသည်။ ထို့ကြောင့်လက်ဆေးခြင်းတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်းအတွက် faucet ကိုမထိရန်လိုအပ်သည်။ ဤ faucet ဖြင့်သင်၏ရေသုံးစွဲမှုအကြီးအကျယ်လျော့ကျသွားမည်ဖြစ်ရာနောက်တဖန်ရေလျှံသွားမည်ကိုသင်ဘယ်တော့မှစိုးရိမ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်ဆေးရုံနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအတွက်လျှောက်ထားရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
အလိုအလျောက် inductive Faucets